Irediyo engahlawulwayo -IiRadiyo zeNethiwekhi
Ikhaya / Irediyo engahlawulwayo
Udidi: Irediyo engahlawulwayo
Nceda uqiniseke ukuba IBoxchip S700A inamandla ngokwaneleyo ebhetri ekuqaleni.
1 intambo yohlobo C lwe-USB kunye nekhompyuter eneWindows 7 okanye ngaphezulu iyafuneka. Inguqulelo yeNetwork yeSakhelo akufuneki ibe ngaphantsi kwe-4.0.
Hlohla Ukufakwa kwephakheji yeBPS naphi na apho ufuna khona.
1.2 Yenza kungasebenzi i-USB
Sifuna ukwenza i-USB kungasebenzi kwisixhobo sakho ngenxa yokufunda kwe-BPS kunye nokubhala iifayile zokwenza ngokwezifiso nge-USB. Singayenza ukuba ilandele la manyathelo:
a) Amandla kwisixhobo;
b) Khetha "Useto-> Ngefowuni";
c) Cofa "Inombolo yoMakhi" amaxesha ama-3 ngokukhawuleza kwaye uya kubona incam;
d) Buyela "kuseto", kukho "ukhetho lonjiniyela" imenyu yento engentla "Malunga nefowuni";
e) Khetha "ukhetho lonjiniyela" kwaye ulayite "Yivule";
f) Tsala phantsi kude kube "yi-USB Debugging" kwaye uyenze isebenze;
g) Qhagamshela isixhobo ngekhompyuter ngohlobo lwe-C lwentambo ye-USB. Unokubona ukuprintwa kweminwe okokuqala, jonga kwaye uvume.
1.3 Cacisa uguqulelo oludala lweNgxelo
Vula isixhobo esivela "kwiKhompyuter yam kwidesktop, SIKA iifayile zohlobo oludala ukuba zikhona - iifayile zohlobo lwakudala kufuneka zibe sendleleni" S700A \_ Ugcino lwangaphakathi \_ CONTACTLIST.xls "kunye ne" S700A \_ Ugcino lwangaphakathi \_ PTT_CHANNEL_LIST_DATA.xls " , ungagcina ezi fayile zimbini kwikhompyuter kwidiski.
1.4 Faka iNguqulelo eNtsha yeNguqulelo
Khuphela "DMR_V014_sign.apk" ukuya ku- "S700A \_ Ugcino lwangaphakathi \_" kwaye uyifake, emva koko sinokwenza isixhobo
2.1 Khetha isixhobo
Ngokubanzi, i-BPS iya kuthi ibone kwaye ikhethe isixhobo ngokuzenzekelayo xa uvula njengezantsi kwesikrini. Kodwa nceda uqaphele ukuba i-BPS ayixhasi izixhobo ezininzi ngoku.
Isisombululo se-BPS asifumani sixhobo, mhlawumbi akufuneki uzame onke amanyathelo:
a) Qinisekisa ukuba "i-USB Debugging" yenziwe;
b) Xhuma intambo ye-USB ixesha elininzi;
c) Qala kabusha isixhobo sakho;
d) Qala kabusha ikhompyuter yakho;
e) Faka "adbdriver.zip" kwikhompyuter yakho;
f) Okokugqibela khuphela "adb_usb.ini" ukuya ku "C: \_ Abasebenzisi \_ Igama Lakho \_ .Android \_".
2.2 Funda ulwenziwo
Cofa iqhosha eliluhlaza ukuze ufunde ngokwezifiso kwisixhobo, uya kubona "Inombolo yeModeli" kunye "neNombolo yeNombolo" igcwaliswe apha ngezantsi.
Ngethuba lokuqala unokufumana impazamo yokufunda ngenxa yokuba akukho nto intsha yokwenza izixhobo, zama ukuyibhala ngoko
2.3 Bhala ulwenziwo
Yenza ngokwezifiso zonke iiparameter, emva koko ucofe iqhosha elibomvu ukuze ubhale ngokwezifiso kwisixhobo sakho.
ezaposwa ngomhla Septemba 5, 2018 Septemba 5, 2018
Esi sikhokelo sikhawulezayo siza kuchaza ukuba ungazicwangcisa njani ii-DMR frequency kwi-Boxchip S700A
Kuqala, nceda ufunde "Incwadi yomsebenzisi ye-S700A DMR”Ukwazi ukuseta isantya seDMR.
Emva koko, faka ulwazi oluchanekileyo kwi Uluhlu lwesiteshi se-PTT kunye noluhlu lwabafowunelwa olugqwesileyo ngokwencwadana yomsebenzisi,
Okokugqibela, ngenisa la maphepha ama-2 kwirediyo yakho.
Funda ngakumbi malunga nonomathotholo omkhulu